ဇက်ဗီလင်းတန်း: April 2011
ပညာတတ် မြန်မာ ဘလောက်ဂါတွေ
Titanic ချစ်သူများ ဇာတ်လမ်းအပြည့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ဖရီးကြည့်လို့ရတဲ့နေရာ တွေ့တာနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေတာပါ။VDO ချဲ့ချင်ရင် အောက်က အကွက်လေးတွေမှာ အပေါ်ဘယ်ဘက်ကို ညွန်းတဲ့ မျှား လေး တစ်ချက် ကလိရင် အကြီးကြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ပြန်သေးခိုင်း ချင်ရင် လည်း အဲဒီမျှားလေး ကိုပဲပြန် ကလိပါနော်။မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက်ပါ။အဟောင်းကြီးပါ။ဒါပေမဲ့ ပြန်ကြည့်ရင် ကောင်းတုန်းပဲဟေ့။
ဆိုတဲ့ အိမ်ရှေ့က မှတ်တိုင်ကလေးတွေ
ငါက ဘယ်နှစ်ခါ ပွဲလုပ်တယ်
ခေါနုမ်းတုန် သက်သေ။ ။
Posted by ZP.LINTAN at 7:03 AM
Mizoram Collection Top Ten Love Songs MTV
Posted by ZP.LINTAN at 5:14 AM
ကဗျာဆရာကြီးတွေရဲ့ ကဗျာလောက်မလှပပေမယ့် ကဗျာလို့သဘော ထားပြီးဖတ်လိုက်ပါ။ရင်တွင်းဖြစ်လေးပါ။Zp.Lt(မင်းတပ်)
Posted by ZP.LINTAN at 4:36 AM
Chin Music Videos ထွဏ်းခမ်
Posted by ZP.LINTAN at 11:36 PM
Posted by ZP.LINTAN at 5:51 AM
Phai Khaw Pum Im Hmawng Nak
ဒီဗီဒီယိုသည် ရိုးဖေါင်နှစ်ခြင်း အသင်းတော် ဘုရားကျောင်းဖွင့်ပွဲ၊ MB အစည်းအဝေး နှင့်(၄)ကြိမ်မြောက် လူငယ် ဓမ္မညီလာခံ ပေါင်း၍ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရိုးဖေါင် ရွာတွင် ပထမဦးဆုံး ထွက်လာသော ဗီဒီယိုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Zophawng Pum Im hmawng nak kei Videos khaw cawh ah taih law awm kya caw. Tat lah bilawh thei sui yawm xh kya ky,xh sing tu phei ya pi tha nak he awm taih yawm kya caw.Mi khaw ah tyi lawng pyng ngei Video tu kha xh chyk kam dyt tei yawm mi khui hlim mei kha mi van nei ma mawng ngawm kya caw.Bxn Bau pyng avan nei fan na YEI KYAI NAK xh bxih hlawt caw.Nam Bx Ni.
ä,oe =x awna ü=Y
Hung Kee Ei Suh Tawng Pawi-Min Dat Khaw
သတိ။ ။Phai Khaw Video တွင် တင်သမျှ ဗွီဒီယိုများသည် အမှတ်တရ ဗွီဒီယိုများ ဖြစ်သဖြင့် ဓာတ်ပုံအဖြစ် ရိုက်ကူးရောင်းချခြင်း(သို့) ဗွီဒီယို၏ ကောင်းသည့် အခန်းများကို ဖြတ်ပြီး စီးပွားရေး အဖြစ်ရောင်းမည့် အခွေတွင် ထည့် တွင်းခြင်း မပြုလုပ်ကြပါရန် အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။